Inkasto Xaasaska Qaarkood Ay Ragooda Hagaajiyaan Hareeraha Ka Raacaan Hu' Magaalo Saaraan Hoori Waa Iska Hoori .. Ninki Labada Xaas Lahaa Oo Cashar Loo Dhigay
Nin baa in badan guur u meer ahaa. Isaga oo aan weli guursan ayuu nin weyn oo garmadoobe ah noqday. Timihiisiina ciradi ku dhigtay Ka-dibna dadaalkii uu u guur meerayay ayuu kordhiyay. Maalin ayuu laba Dumar ah, mid yar iyo mid weyn la kulmay Labadiiba wuu jeclaaday ugu dambeyna waa guursaday.
Gabadhii yarayd waxay jeclaatay inuu ninkeedu u muuqdo nin dhalinyaro ah qurux-badan oo firfircoon. Sidaa darteed dharkii dhalinyarada ayay u diyaarisaa, cadaro iyo Karemo ayay u diyarisaa, tihimahana Tinkii ciro ah ee ay aragtoba way ka gooysaa.
Gabadhii weynaydna waxay jecelaatay inuu nin-keeda da’doodu isku dhowaato. Iyana dhinaceeda dharka waayeelka ayay u diyaarisaa Timaha madowna waa ka gooysaa.
Ninki markii hore ogaalka iyo xanaanada labdiisa Dumar ah aad buu u jeclaystay. Hasa ahaatee mudo ka dib ayaa waxaanu filayn ku soo baxeen. Sida ay labadii dumar ahaa midna Tinka ciro u gooynaysay midna Tinka madow ayay timihii madaxiisa ka dhameeyeen oo bidaar siman gashay!!!